किन लगाउने मेहन्दी ? मेहन्दी लगाउँदा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू - ज्ञानविज्ञान
मेहेन्दि गाढा लगाउने तरिका यस्तो छ :
साउन महिना मेहेन्दीको महिना हो । हरियो पहेलो पहिरनका साथ श्रृंगारको रुपमा हरियो पहेलो चुरा पोतेका साथमा मेहन्दीको पनि विशेष प्रयोग साउन महिनामा हुने गरेको छ ।
केही वर्षपहिला विशेषगरि भारत र नेपालको तराई क्षेत्रमा मात्र मेहन्दीको प्रयोग हुने गरेको भएपनि अहिले देशभर यसको प्रयोगले व्यापकता पाएको छ ।
साउन लागेसँगै सडक पेटीदेखि मेहन्दी लगाउने युवती र लगाइदिने डिजाइनरसम्ममको भीड देख्न सकिन्छ । मेहन्दी नलगाएका युवतीको हात नै देखिँदैन भन्दा पनि हुन्छ साउनमा ।
किन लगाउने मेहन्दी ?
साउनमा हरियो पहिरनको महत्व प्रकृतिसँग जोडिएको हुन्छ । प्रकृति प्रेमी भगवान शिवलाई खुसी पार्न र आयु आरोग्यको लागि साउनमा हरियो पहिरनका साथ हरियो पहेलो चुरा पोते लागाउने गरिन्छ भने मेहन्दीको प्रयोग किन गरिन्छ त ? धर्मशास्त्र र फेसनसँग यसको के सम्बन्ध छ भन्ने थाहा पाउनु जरुरी हुन्छ ।
महिलाको श्रृंगारको चर्चा धर्मशास्त्रहरुमा पनि गरिएको छ । नारीका सोह्र श्रृंगारबारे उल्लेख गरिएको पाइन्छ जसमा मेहन्दीको पनि उल्लेख गरिएको छ ।
मेहन्दीलाई शुभ कामको प्रतिकको रुपमा पनि लिने गरिएको छ ।
मेहन्दीलाई जीवनका साथ परिवारमा प्रेम र स्नेहको प्रतिकको रुपमा लिने संस्कृति रहेको छ ।
कतिपयले हातमा वा खुट्टामा लगाइएको मेहन्दीको रंगको अवस्थाले प्रेमी प्रेमिका वा पतिपत्नीबीचको सम्बन्धलाई दर्शाउने बताउने पनि गरेका छन् ।
त्यस्तै असारमहिनामा खेतबारीको काम सकिएसँगै फुर्सदको समय हुने र त्यस समयमा शरीरलाई राम्रो र आकर्षक राख्नका लागि मेहन्दीको प्रयोग गर्न थालिएको हो ।
अहिले मेहन्दीका विभिन्न डिजाइनहरु प्रचलनमा रहेको पाइन्छ । यस्ता डिजाइनहरुको तस्वीरसहित मेहन्दी लगाउनेहरु विभिन्न स्थानमा भेटिने गरेका छन् ।
खासगरि अहिले अरविक र व्राइडल डिजाइन वढी चल्तीमा छ । पछिल्लो समय गोल्डेन अरविक, लेटेस्ट अरविक, सुपर्व हिना युवतीहरुले रुचाएको पाइन्छ । भारतमा विशेषगरि कर्माचौथ, विवाह, श्रावण लगायतमा फरक फरक डिजाइनका मेहन्दीको प्रयोग गर्ने गरिएको पाइन्छ ।
कसरी बनाउने मेहन्दी ?
मेहन्दी घरमै पनि बनाउन सकिन्छ । मेहन्दीका लागि मेहन्दीको एक रुखका पातलाई पिसेर पनि यसलाई बनाउन सकिन्छ । तिउरीमा फर्सिको फूल, सिमीको पाता मिसाएर मेहन्दी घरमै पनि बनाउने गरिन्छ ।
तर यो झन्झटिलो हुने भएकाले आजभोलि युवतीहरुले तयारी अवस्थामा कोनमा पाइने मेहन्दीको बढी प्रयोग गर्ने गरेका छन् । मेहन्दीलाई गाढा लाग्ने बनाउन विभिन्न केमिकलको प्रयोग हुने भएका करण यस्तो मेहन्दीको सट्टा घरमै बनाइएको मेहन्दीको प्रयोग राम्रो हुन्छ ।
यसरी तयार पार्नुहोस्
मेहन्दीको धूलोलाई मलमलको कपडाले दुई तीन पटकसम्म चाल्ने
चियापत्तीको पानीमा मेहन्दीलाई करिब पाँच घन्टाजति भिजाउने ।
मेहन्दीको तेल केही थोपा मिसाउने । यसो गर्दा मेहन्दी गाढा बस्छ ।
त्यसपछि तयार भएको मेहन्दीलाई लगाउन मिल्ने गरि तयार गरिएको प्लास्टिकको कोनमा भर्ने र आफूले चाहेको आकृति अनुसार हात वा शरीरका विभिन्न भागमा भर्ने ।
साउने संक्रान्ति पर्व शुरु भएसँगै महिलाहरुमा मेहेन्दी र हरियो चुरा लगाउने प्रचलन छ । वनजंगल, खेतवारी मात्र नभई साउन महिना शुरु भएपछि महिलाहरुका हातमा हरियो चुरा र मेहेन्दी देखिन्छ । विवाहित महिला सौभाग्यको प्रतिकको रुपमा हरियो चुरा लगाउँछन् । अविवाहित युवती पनि राम्रो वर प्राप्त होस् भन्ने भनि हरियो चुरा र मेहन्दी लगाउँछन । तर, यो चलन कहिलेबाट आयो र किन साउन मै हरियो चुरा र मेंहन्दी लगाइन्छ भन्नेबारे सबैलाई थाहा नहुन पनि सक्छ ।
Don't Miss it सावधान ! हेडफोन प्रयोग गर्नुहुन्छ भने तपार्इले यस्ता समस्या झेल्नु पर्छ
Up Next छालामा अचानक कसरी देखिन्छ निलो दाग ? यस्ताे छ कारण
यस्ता छन्, मदिरासंग कहिल्यै पनि खानु नहुने कुराहरु
– केही मानिस मदिरासंग दूधबाट बनेका उत्पादन दही, चीज या मक्खन आदि खाने गर्छन् । यी चिज पचाउन धेरै समय…